Baiboly pejy 47 - Ny Baiboly
Voalohany < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Manaraka Farany
Eksaody toko 28 (tohiny)
9Ary makà vato berila roa, dia hosokirinao aminy ny anaran'ny zanakalahin'Israely: 10ny enina amin'ny anarany, amin'ny vato iray, ny anarany enina sisa amin'ny vato iray, alahatra araka ny fizokiany. 11Tahaka ny fikapa vato sarobidy sy fisokitra fanombohan-kase aminy, no ho fisokitrao ny anaran'ny zanak'Israely amin'ireo vato roa ireo, ary hasianao randram-bolamena manodidina izy. 12Ataovy eo amin'ny soroky ny efoda ireo vato roa ireo, ho vato fahatsiarovana ny zanak'Israely, fa hoentin'i Aarona amin'ny sorony roa eo anatrehan'ny Tompo ny anaran'izy ireo ho fahatsiarovana. 13Ary manaova randram-bolamena, 14sy rojo volamena madio madinika roa hatao mirandrana toy ny tady, araiketo amin'ny randram-bolemana ny rojo madinika miendri-tady.
41Hampiakanjoinao Aarona rahalahinao, sy ny zanany koa, hosoranao izy, hatokanao izy, ho hamasininao izy, mba ho mpisorona hanao fanompoana ahy. 42Manaova kalisaona rongony fotsy ho azy ireo, hanarona ny fitanjahany; ataovy hatreo amin'ny valahany ka hatreo amin'ny feny. 43Ireo no hoentin'i Aarona sy ny zanany, na hiditra eo amin'ny trano lay fihaonana izy ireo, na hankeo amin'ny otely hanao ny fanompoam-pivavahana eo amin'ny fitoerana masina. Ary amin'izany dia tsy ho voan-keloka izy ka tsy ho faty. Lalàna mandrakizay izany, ho an'i Aarona sy ny taranany mandimby azy.
Eksaody toko 29
Fanamasinana ny mpisorona - Ny fisoronana mandrakizay.
1Izao no ataovy amin'ny fanamasinana azy ireo ho mpisorona ho ahy: Makà vantotr'ombalahy iray sy ondralahy roa, samy tsy misy kilema. 2Mofo tsy misy lalivay, mofo mamy tsy misy lalivay voadity tamin'ny diloilo, mofo mamy manify tsy misy lalivay voatondraka diloilo, ka lafarinim-barim-bazaha tsara indrindra no hanaovana azy. 3Ataovy an-tsobika iray ihany izy, dia atero izany ao anatin'ny sobika miaraka amin'ny vantotr'ombalahy iray sy ny ondralahy roa.
4Dia ampandrosoy Aarona sy ireo zanany, ho eo amin'ny fidirana amin'ny trano lay fihaonana, ka ampandroy amin'ny rano izy. 5Rahefa izany alao ireo fanamiana, ka ampiankanjoy an'i Aarona ny akanjo anatiny, ny akanjo lavan'ny efoda, ary ny efoda sy ny saron-tratra, dia hetrao amin'ny fehin-kibon'ny efoda izy. 6Ataovy eo an-dohany ny hamama, ary ataovy eo amin'ny hamama ilay diademam-pahamasinana. 7Dia alaovy ny diloilo fanosorana, ka aidino eo amin'ny lohany hanosoranao azy. 8Ary ampandrosoy koa ireo zanany, ka ampiakanjoy ny toniky. 9Aarona sy ireo zanany samy hetrao amin'ny fehin-kibo; ary ireo zanak'i Aarona ampisatrohy mitra. Dia ho azy ireo, amin'ny lalàna mandrakizay ny fisoronana; ary hanokana an'i Aarona sy ireo zanany hianao.
10Ny ombalahy hoentinao mankeo anoloan'ny trano lay fihaonana, ary Aarona sy ireo zanany hametraka ny tànany eo ambonin'ny lohan'ny ombalahy. 11Hovonoinao eo anatrehan'ny Tompo ny ombalahy eo amin'ny fidirana ho ao an-trano lay fihaonana; 12ka angalao ny ran'ny ombalahy atenteno amin'ireo tandroky ny otely amin'ny fanondronao, dia araraho eo am-pototry ny otely avokoa ny sisa. 13Alaovy avokoa ny sabora safodrorohany, ny saron'atiny, ny voany roa mbamin'ny fonom-boany, ka indray dory hanetona eo ambony otely. 14Fa ny nofon'ny ombalahy kosa mbamin'ny hodiny sy ny tain-drorohany, dory amin'ny afo any ivelan'ny toby: sorona noho ny ota izany.
15Alao ny iray amin'ireo ondralahy, ka Aarona sy ny zanany hametraka ny tànany ambonin'ny lohan'ny ondralahy;
Pejy: Voalohany < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.9685 seconds